Hoggaamiyihii Inqilaabka Ku qabsaday Talada Wadanka Suudaan oo si lama filaan ah isku Casilay.
Saturday April 13, 2019 - 11:03:29 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa si lama filaan ah isku casilay Jeneraalkii hoggaaminayay Inqilaabkii Melleteri ee wadanka Suudaan ka dhacay khamiistii lasoo dhaafay.
Boqolaal qof oo isku gedaamay gaariga Jeneral Cowf
Jeneraal Cawad Bin Cowf oo ahaa wasiirka difaaca iyo guddoomiyaha golaha Melleteriga KMG ah ayaa xalay ku dhawaaqay in uu iskacasilay xilkii uu hayay waxaana durbadiiba loo dhaariyay Jeneraal Cabdi Fataax Al Burhaan oo kamid ahaa mas'uuliyiinta ciidanka dowladda Suudaan.
Bayaan uu Bin Cowf xalay ka akhriyay Telefeshinka Afka dowladda ku hadla ayuu ku sheegay in uu ka tanaasulay xilkii uu hayay si looga fogaado khilaaf iyo kala qeybsanaan hor leh wuxuuna ugu baaqay dhammaan saraakiisha golaha Melleteriga KMG ah in ay la shaqeeyaan hoggaanka cusub.
Kumanaan kun oo qof ayaa durbadiiba dabaal degyo ka dhigay magaalada caasimadda ah ee Al Khurduum saacado kadib markii uu iscasilaadda ku dhawaaqay Jeneraal Bin Cowf, dadka ayaa ku qeylinayay Erayo ay kamid ahaayeen "Midkii labaad ayaa dhacay" oo ay ula jeedaan in Jeneraal Cawad uu ahaa ninka 2aad ee ku xigay Al Bashiir.
Guddiyada Kooxaha Kacdoonka wadanka Suudaan ayaa durbadiiba soo dhoweeyay isbedelka lagu sameeyay hoggaanka ciidamada waxayna sheegeen tani in ay tahay dib usixidda khaladaadkii dhacay waxayna dalbadeen in si degdeg ah loosoo dhiso xukuumad Rayid ah oo ka duwan middii uu Al Bashiir madaxda ka ahaa.